Italy Kanzuru yeMakurukota Inobvumidza Matanho Ekusimudzira Tourism Zvino
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Italy Kuputsa Nhau » Italy Kanzuru yeMakurukota Inobvumidza Matanho Ekusimudzira Tourism Zvino
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Italy Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Mutungamiriri weItaly weTourism, Massimo Garavaglia
IItaly Council of Ministers yakabvumidza matanho eNational Recovery uye Resilience Plan inotsigira mabhizinesi ekushanya munyika.
€ 191.5 bhiriyoni muzviwanikwa zviri kugoverwa kuburikidza neKudzoreredza uye Resilience Facility.
Hurongwa uhu kupindira kwakanangana nekugadzirisa kuparara kwehupfumi nemagariro zvakakonzerwa nedambudziko redenda.
Mari inosanganisira kuisa mari muzvikamu zviviri zvakakosha zveItari, zvinoti zvekushanya uye tsika, uchishandisa nzira yedhijitari yekutangazve.
Sangano reNational Recovery and Resilience Plan (NRRP) rakaunzwa neItari rinotarisira kudyara mari uye hurongwa hwekuvandudza, ine €191.5 bhiriyoni muzviwanikwa zviri kugoverwa kuburikidza neRecovery and Resilience Facility uye €30.6 bhiriyoni iri kupihwa mari kuburikidza neComplementary Fund yakagadzwa neItaly Decree-Law. Nhamba 59 yaChivabvu 6, 2021, zvichibva pamusiyano webhajeti wemakore akawanda wakatenderwa neItaly Council of Ministers musi wa15 Kubvumbi.
Iyo Plan inogadzirwa yakatenderedza 3 strategic nzvimbo dzakagovaniswa padanho reEuropean: digitization uye hunyanzvi, shanduko yezvakatipoteredza, uye kubatanidzwa munharaunda. Iko kupindira kune chinangwa chekugadzirisa kukuvadzwa kwehupfumi nemagariro kwakakonzerwa nedambudziko redenda, zvichibatsira kugadzirisa kusasimba kwehupfumi hweItaly, uye kutungamira nyika munzira yekuchinja kwezvakatipoteredza uye kwezvakatipoteredza uye ine nhanhatu mishoni dzinosanganisira kushanya.
"Digitization, Innovation, Competitiveness, Culture" inopa huwandu hwe49.2 bhiriyoni (iyo € 40.7 bhiriyoni kubva kuRecovery and Resilience Facility uye €8.5 bhiriyoni kubva kuComplementary Fund) nechinangwa chekusimudzira shanduko yedhijitari yenyika, inotsigira hunyanzvi mu iyo yekugadzira sisitimu, uye kuisa mari muzvikamu zviviri zvakakosha neItari, kureva kushanya netsika; nemamwe mazwi, nzira yedhijitari yekutangwazve kwekushanya uye tsika.
Mutungamiri we Federalberghi, Sangano reItaly rehotera renyika, Bernabo Bocca, akati iyi ijekiseni rakakosha rekuvimba nevemabhizinesi nevashandi, uye akatenda Gurukota rezvekushanya kweItaly, Massimo Garavaglia, nekubvuma kushandiswa kweFederalberghi. Bocca akaenderera mberi achiti:
“[Izvi] kusimudzira kwakakosha kuvimba kumabhizinesi ekushanya nevashandi. Matanho akapihwa nemutemo anopa mupiro wakakosha mukutangazve, sezvo vachitsigira kuvandudzwa kwenzvimbo dzekugara, nemipiro isingabhadharwe uye kiredhiti yemutero, uye inoperekedza kubviswa kwechikwereti, kuitira kuti bhizinesi rienderere mberi. muchikamu chekushanya uye garandiro yezvekudiwa kwemari uye mari.
"Tinotenda Gurukota Garavaglia nekugamuchira zvikumbiro zveFederalberghi, kushandura maturusi ekubatsira makambani kukunda chikamu ichi icho kune vazhinji chichiri chakaomarara, uye kuita mari inodiwa kukwikwidza nemakwikwi anotyisa epasirese."
Chiitiko chake chinopararira pasi rose kubvira 1960 apo pazera remakore 21 akatanga kuongorora Japan, Hong Kong, neThailand.
Mario akaona iyo World Tourism ichikura kusvika parizvino uye akapupurira
Rezinesi raMario reMutori wenhau riri ne "National Order of Journalists Rome, Italy muna 1977.